भोलि संसदबाट नयाँ नक्सा पारित हुने दिन, भोलि नै विशाल प्रदर्शन किन? – Jagaran Nepal
भोलि संसदबाट नयाँ नक्सा पारित हुने दिन, भोलि नै विशाल प्रदर्शन किन?
काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको लिम्पियाधुरा सहितको भूमी समेटिएको नयाँ नक्सा भोलि पारित हुने भएको छ। नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गर्न ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि बढाइन लागिएको हो। संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
संविधान संसोधन विधेयकको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुने छ। अहिलेसम्म विवादित सांसद सरिता गिरीबाहेक कसैले विधयकको विरुद्धमा सूचना दर्ता गराएका छैनन्। नयाँ नक्सा पास हने दिन भोलिनै विभिन्न समुह बनाएर युवाहरुले माइतिघरमा सरकारविरोधी ठूलो प्रदर्शन आयोजना समेत गरेका छन्।
(प्रदर्शनकारी समूहबाट र्यालीमा सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको पर्चा)
अहिलेसम्म युवाहरुले प्रदर्शनका क्रममा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्च विवरण पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
युवाहरुको प्रदर्शनलाई जायज रुपम लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, नयाँ नक्सा संसदबाट पारित हुने ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिन नै सरकारविरोधी प्रदर्शनको आयोजना किन गरियो ? भन्दै प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
जायज माग राखेर हुँदै आएको प्रदर्शन भोलि एक दिनका लागि रोक्नुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ। यसको आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य प्रभाव ठूलो पर्ने र नयाँ नक्साको विरोधमा हुनेहरु सडकमा आउनसक्ने भन्दै भोलिको र्याली स्थगित गरिनुपर्ने धेरैको सुझाव छ।
प्रदर्शनकारी समूहले भने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकाले स्थगित गर्न नसकिने बताएको छ। भोलि प्रदर्शन भए भारतले परिचालन गरेको भन्ने आरोप लाग्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले एक ट्विट गर्दै भोलि एक दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न सकिदैन ? भनेर प्रश्न गरेका छन्।